Ny fampakaram-bady - fotoana tena mahagaga ho an'ireo tia olona, ​​ary manao dia tena mahafinaritra tokoa ny dia mankany Maldives .
Nahoana ireo Maldives?
Ny nosy eo afovoan-dranomasina dia paradisa ho an'ny mpifankatia, izay misy zavamananaina mifankatia. Amin'ny fotoana Maldives dia tsy mahafantatra ilay volavolan-dalàna, dia voahodidin'ny onja malefaka malefaka ianao, mandomando amin'ny fasika loko matevina. Ary ny tena zava-dehibe dia tsy misy olona hisakana ny mpivady tsy hifankatia eto. Maro no mihevitra fa ny Maldives no safidy tsara indrindra ho an'ny lanonana fampakaram-bady.
Ny sokajy mahazatra indrindra amin'ny mpizaha tany ao amin'ny Maldives dia divay. Ny mpivady vao haingana dia eto amin'ity lisitra ity isa faharoa, noho izany dia manana serivisy manokana ho an'ireo vahiny ireo. Ny mpivady am-pitiavana eto dia afa-po amin'ny lanonana mahavariana sy mahatalanjona, avy eo dia misy sary vetivety sy sary mahatalanjona amin'ny fampakaram-bady ao Maldives.
Misy ny lanonana mariazy any Maldives toy izao:
Ampiasao ny fankalazana. Ny mpikarakara dia misafidy toerana eny amoron-tsiraka, izay mametraka lalan-tany sandoka amin'ny fozaka fotsy mamelatra eo amin'ny rivotra.
Fiomanana. Ny fotoana fampakaram-bady dia maharitra iray ora. Saingy manomboka ny fiomanana ny maraina: ny ankizilahy sy ny ampakarina dia mankafy ny fitsaboana spa, mifototra amin'ny fankalazana ny fampakaram-bady tsara tarehy. Avy eo, ny fiovan'ny akanjo, ny mpampakatra miandry ny vadiny amin'ny ho avy eo amoron-dranomasina. Amin'izao fotoana izao, ny ampakarina, manao akanjo lava tsara tarehy, dia mamaritra ny volony amin'ny voninkazo fampakaram-bady nentim-paharazana. Ry tanora, alohan'ny handehanany eny an-dalana, manasa ny tongony ary manamboatra lava-pirazanana lava -kandy - lovia maldiviana mahafinaritra izany.
Lanonana. Eo ambanin'ny feon-kiran'ny Maldiviana tsara tarehy misy ny tanora nentina tamin'ny alàlan'ny arofanina namboarina mankany amin'ny alitara miaraka amin'ny voninkazo hafakely. Ny fianianana rehetra sy ny voady amin'ny tsy fivadihana dia voalaza ao. Ny alitara dia manao fombafomba amin'ny fiteny eo an-toerana, iray amin'ireo "mpitarika" eo an-toerana no maneho teny manetriketrika. Vavolombelona ao amin'ny fampakaram-bady no singa telo amin'ny natiora - ny tany, ny rivotra ary ny rano, izay fototry ny fanjakana Maldiviana. Rehefa nampanantena ny fitiavana amam-bika sy fifanakalozam-bidy izy ireo dia afaka mankafy ny fanorohana voalohany ireo mpivady vao. Amin'ny faran'ny fampakaram-bady, ireo zaza vao teraka dia aseho amin'ny taratasy fanamarinana, izay porofon'ny fampakarambady ho an'ny roa ao amin'ny Maldives. Aorian'ny fampakaram-bady, ireo vao teraka dia mety ho lasa mahery fo amin'ny fisarihana sary eo amin'ireo nosy .
Ny fombafomba voalaza etsy ambony dia heverina ho marimaritra iraisana. Mety misy fahasamihafana kely eo amin'ny fonosana "fampakaram-bady" izay napetraka ao amin'ny hotely. Alohan'ny fikarohana trano fandraisam-bahiny any Maldives, diniho tsara ny fampakaram-bady rehetra, satria tsy misy olona mamela fanovana. Amin'ny voalohany, eritrereto ny safidinao rehetra ary misafidy andrim-panjakana izay mifanaraka aminao amin'ny fepetra rehetra. Etsy andaniny, ny fampakaram-bady ao amin'ny Maldives dia tandindona: ankoatra ny fanamarinana izay tsy misy hery ara-dalàna, dia afaka mahita fahafinaretana sy fialam-boly tsara ianao.
Fombafomba tsy marim-pototra
Mpivady tanora matetika ny Maldives. Noho izany, ny trano fandraisam-bahiny tsirairay dia miezaka mitaona zavatra miavaka sy manokana, mba hanavahana ny tenany amin'ny nosy manodidina. Ao anatin'izany fifaninanana henjana izany dia samy hafa amin'ny fombafomba manokana ny fombafomba serivisy:
sakafo matsiro mahafinaritra mandritra ny sakafo hariva ho an'ny roa;
Mandeha amin'ny làlan-jazakely miloko mipoitra avy hatrany rehefa vita ny fampakaram-bady;
ny fahafahana handany ny fampakaram-bady amin'ny alina anaty bungalow any amin'ny nosy iray any an'efitra;
ny safidy ny hivory ampakarina iray izay mety tsy mitovy amin'ny fenitra: ohatra, zazavavy iray dia azo atolotra avy amin'ny lagoon iray amin'ny sambo voaravaka orana na entina amin'ny palanquin;
Ny lanonana dia azo atao na dia eo afovoan'ny ranomasina aza, amin'ny sambo iray.
Hotels specializing in weddings
Saika ny trano fonenana dimy kintana ao amin'ny lisitr'izy ireo dia manana tolotra ho an'ny fety fampakaram-bady. Amin'ny ankapobeny, ireto fitsipika manaraka ireto dia napetraka:
mpandrindra ny fampakaram-bady sy ny mpiambina manokana;
spa na fomba fitsaboana hafa fiomanana;
fampakaram-bady akanjo - national sy nentim-paharazana;
fiara fitateram-bahoaka - bibikely na sambo iray ho an'ny nosy;
fananganana ny andohalambo sy ny alitara;
voninkazo voninkazo, fehezam-boninkazo ary boutonniere;
marika na fampakaram-bady;
mofo, tavoahangy champagne ary taratasy fanamarinana;
mandehana amin'ny yacht;
voninkazo voninkazo ao amin'ny efitrano;
serivisy ho an'ny mpilalao sary sy lahatsary.
Misy trano fandraisam-bahiny manana teboka manokana, izay manavaka azy ireo amin'ny ambiny. Ny mahaliana indrindra amin'ireo izay mitondra fampakaram-bady ao amin'ny Maldives dia:
Ny Kanuhura Beach & SPA Resort dia toeram-pitsangatsanganana ao amin'ny atolin'i Laviani . Eto no misy ny fomban-drazana fampakaram-bady Maldiviana izay azo amidy malalaka: sariaka sarobidy maro be, hazo palmie ary ny fampakaram-bady voalohany amin'ny alina any amin'ny nosy tsy misy mponina.
Sheraton Maldives Full Moon dia trano fandraisam-bahiny mahafinaritra hita any amin'ny nosy Furana Fushi. Ny fanasongadinana dia ny spa-habakabaka mahavariana, miorina amin'ny nosy mitokana.
Conrad Maldives Rangali Island - trano ambanin'ny rano ao amin'ny nosy Rangali. Manome hevitra momba ny fanaovana fampakaram-bady any amin'ny trano fisakafoanana iray izy. Misy ihany koa ny efitrano ahafahanao mandany alina fampakaram-bady tsy hay hadinoana ao amin'ny ranomasina lalina.
Ny Hilton Maldives Resort & SPA ao amin'ny nosy Rangali dia malaza amin'ny fampakaram-bady marobe. Anisan'izany: fampakaram-bady ho an'ny mpitaingina mariazy, sambo amoron-dranomasina, fiara fitaterana mariazy amin'ny yacht.
Coco Palm Dhuni Kolhu ao amin'ny nosy Dunikolu dia manolotra fombafomba maharitra 3 ora, arahin'ny sakafo fisakafoanana am-bifotsy sy ny sakafo maraina sasatra.
Fampakaram-bady ho an'ny mariazy, na paradisa ho an'ny mpitaiza
Ny fampakarambadin'ny mariazy any Maldives dia afaka mandeha anaty rano. Ho an'ireo izay te hidina lalina ao anaty rano, ny fanambadiana toy izany dia safidy tena mahaliana. Ny mpampianatra ny fampakaram-bady ho mpampianatra mahay, ary vavolombelona - ny mponina ao amin'ny lalina. Afaka manao akanjo ho an'ny tsironao ianao: mety ho fahazavana eoropeanina na firenena, na fihosana tsotra fotsiny. Ny zava-drehetra dia manomboka amin'ny hoe nesorina ny mpivady avy tao amin'ilay trano fandraisam-bahiny ary nentina tany amin'ny tranokala manitra, avy eo eo amin'ny alitaran'ny ala dia miteraka fianianana mangina ireo tanora ary avy eo ny oroka dia miverina any amin'ny hotely izy ireo. Avy eo dia alefa any amin'ny toerana fankalazana ny fampakaram-bady ireo mpivady vao. Ny vidin'ny fampakaram-bady tampoka dia manomboka amin'ny $ 1000.
Ohatrinona ny saran'ny fampakaram-bady any Maldives?
Ny saran'ny fampakaram-bady dia miovaova amin'ny $ 700 ka hatramin'ny $ 3.600. Izany dia miankina amin'ny trano fandraisam-bahiny sy ny fomba fampakaram-bady. Sary sy horonan-tsary nozaraina samirery, ny vidin'ny serivisy dia $ 100.
Ny solomaso solomaso vehivavy 2017 - inona no modely tokony harahina amin'ny vanim-potoana vaovao?
Pasta miaraka amin'ny legioma - fomba tsara indrindra ho an'ny sakafo italiana mahafinaritra
Nahoana no ilaina ny tadio?
Ny fitsaboana ireo paoma amin'ny lohataona amin'ny aretina sy ny bibikely - inona no fomba mahomby indrindra?
Fanosihosena ho an'ny jaboka
Fialantsasatry ny lohataona
Hividy sakafo elektrika ho an'ny lakozia - iza no tsara kokoa hisafidy?
Manampy anao handany lanja ve ny fampidiran-drivotra?
Ny fambolena malaza indrindra any Rosia
Firy no miaina ny voalavo?
Izany no fomba fijerin'ny printsy Disney ny taona
Nitsangana ny havany: Nahoana no tsy lasa vadin'i Prince Harry i Megan Markle?
Rahoviana ny tovovavy mipoaka any Holandy?
Noho ny fifehezana ilay zaza?